Lapho IMpumalanga NeNtshonalanga Ihlangana
Siyizithandani ezixubile. Umyeni wami, ungowase-Europe mina ngingowase-Indonesian/Javanese. Sineminyaka emi-5.
Siphelezelwa umsizi ongu-1 nomshayeli ongu-1 (ngocingo)
Siyakwamukela ekhaya lethu!
Sisedolobheni lase-MADIUN, Isifundazwe sase-East Java, esiqhingini saseJava, e-Indonesia
Siyibiza nge-Carved Bedroom in West Wing. Iyigumbi elingu-3 x 4 m, iphansi lama-tiles, umbhede wokhuni oqoshiwe - ithebula lasebusuku - ikhabethe lezingubo - isibuko, eline-air conditioning. Igumbi lokugeza elingaphandle (eliyimfihlo), ishawa elibandayo, nezinto eziyisisekelo.
Emuva kwemvelo, ungalala ngenkathi amaxoxo ecula echibini lethu lezinhlanzi. Sinikeza ukudla kwasekuseni okulula okufana ne-toast/irayisi, iqanda/isoseji, ikhofi/itiye, ijusi, isithelo ekuseni. Indlu yethu ifakwe i-inthanethi negaraji, i-TV, i-Cable TV, uxhumano lwe-inthanethi, Ikhishi, igceke elingasemuva le-300 m2, ithala elingaphambili nangemuva, amachibi okudoba ama-2, impophoma.
Igceke lethu elingemuva, ligcwele ukukhanya kwelanga lapho ungaphumuza khona futhi ushise ilanga, noma kungenzeka uvune izithelo ngesikhathi sazo. Sinesihlahla sikagwava, izinhlobo ezi-3 zikamango, izinhlobo ezi-4 zezihlahla zamawolintshi, isihlahla sikapopo, inhlaba, isihlahla se-rambutan, izinhlobo ezi-3 zikabhanana, isihlahla se-pace, nesihlahla se-matoa esivela ePapua. Ukubhema kuvunyelwe kuphela ethafeni.
Indawo: Indlu yethu imizuzu engu-5-15 kuphela uma ushayela ukuya enkabeni yedolobha, esiteshini sesitimela, nasesiteshini samabhasi. Ngingakwazi ukushayela, ukukuthatha noma ukukwehlise lapho kudingeka.
PS : Sivula phakathi kuka-7 Julayi kuze kube yi-7 Agasti 2018.
1. siyilungu le-Historia van Madioen, umphakathi womlando. Sikumema ukuthi uhlanganyele emisebenzini yabo (imali engu-IDR. 10.000/umuntu,-)
2. kunezindawo zokubhukuda (ithikithi IDR. 15.000 - 25.000,-)
3. Isitolo sekhofi esiphethwe umngane siyindlela yokujabulela ikhofi njengabantu bendawo (kusuka ngentengo IDR. 5.000/inkomishi-)
Indawo yethu ithulile, abantu abaningi basebekhulile nasebethathe umhlalaphansi/bempesheni.
Sizoxhumana nsuku zonke nezivakashi, ngoba sihlala endlini eyodwa.